UGisella-Thandazela abantwana bam baseUkraine-Ukubuyela eBukumkanini
Inenekazi lethu ukuze	UGisella Cardia nge-13 kaMeyi, 2022:
Bantwana abathandekayo, enkosi ngokuba lapha nangokusabela ubizo lwam ezintliziyweni zenu. Bantwana bam, thandazani, thandazani; namhlanje njengangoko (ukubonakala eFatima), ndiyaqhubeka nokucela imithandazo kunye nokuguqulwa. Ukuba yonke into ibiyenziwe njengoko bendicelile, benizakufumana uxolo, kodwa endaweni yoko amasango esihogo avuliwe, kwaye ukuba aniziqinisi elukholweni bantwanyana bam, nihamba endleleni eya entshabalalweni. Ndilapha intliziyo ilihlwili ngenxa yayo yonke into oyivumelayo. Bantwana bam, jongani iCawe: ayifuni ukundazi njengoCoredemptrix. NdinguKumkanikazi wezulu nomhlaba, okuzisa kuNyana wam uYesu. NdinguMama wakhe noMama wenu nonke: Yamkelani le nyaniso. Bantwana bam, thandazelani abantwana bam baseUkraine abaphoswa emingxunyeni emibini besaphila. Bantwana bam, umhlaba uya kuzamazama ngakumbi, kodwa musani ukoyika, kuba ndilapha ukuze ndinikhusele. Akusekho xesha: yiba ngakumbi ngokomoya kwaye ubukele imiqondiso yezulu nomhlaba. Ngoku ndinishiya nentsikelelo yam yobumama egameni loYise, loNyana neloMoya oyiNgcwele. Amen.
exhonyiweyo UGisella Cardia, imiyalezo.
← USimona no-Angela-Kunzima…
Luz-Ubuntu buza kuwa… →